Polọ Mgbapụta Cargbọala Na-ahụ Maka N'ogbe Na Ulo Ngwongwo 3x6m Na wlọ Nrụ Anụ na Greenhouse | Winsom
Ọdụ ụgbọ mmiri dị n'èzí na ebe nchekwa ụlọ 3x6m nwere akụkụ dị n'akụkụ
10-29 Ibe 30-49 Ibe > = 50 iberibe
Cangbọ a ụgbọ ala dị mma maka inye ndo na ebe nchekwa maka ụgbọ ala gị, mopeds, ịnyịnya ígwè ma ọ bụ ihe ndị ọzọ dị n'èzí. Can nwekwara ike wụnye ya n'azụ ụlọ gị dị ka nnukwu, ọmarịcha anwụ na-acha iji mee ndị ezinụlọ gị na ndị ọbịa gị ọbịa.
2) bọtịnụ opupu na nkwonkwo maka nhazi dị mfe na iwelata.
3) Oke mkpuchi seams na-ekpo ọkụ, mmiri mmiri.
Nọmba Model WS-CS136
Aha ihe Ọdụ ụgbọ ala na ebe nchekwa na 3x6m nwere akụkụ akụkụ
Ogo Ahịa 10x20ft (3x6m)
Ihe mkpuchi 180gsm PE
Akụkụ akụkụ akụkụ 160gsm PE
Frame spec. Dia 42 * 1.4 / 38 * 1.0mm tubes steel na-acha ọcha kpuchie
Ibu ibu 50kg
13x20ft (3x6m) Ọbịaru Ọkachamara
Nnukwu ụgbọ mmiri nke 10'X20 'mmiri nwere mmiri na-eguzogide, okpomọkụ na-ekpuchi polyethylene n'elu & ihe mkpuchi 38mm dayameta nke a na-agwakọta iji hụ na ụdị nchebe ajari, peeling, na corrosion. Ihe a dị mfe ịtọ carport zuru oke maka inye ndo na nchekwa maka ụgbọ ala, ụgbọ mmiri ma ọ bụ ihe ndị ọzọ.
Ọbụna ụgbọ ala ndị kasị sie ike nwere ike irite uru site na ebe nchekwa ụlọ anyị nke jupụtara emebi. Site na iji ihe dị mfe iji wuo ígwè na ogologo, mmiri na UV ọgụ PE (polyethylene) mkpuchi ihe mkpuchi, carport a na-enye nchekwa dị oke ọnụ. Ngwunye arịlịka nke ọdụ ụgbọ ala a dị arọ na-agbakwunye mmesi obi ike na ụgbọ gị na-echekwa mgbe niile n'ụdị ihu igwe kachasị njọ. Enweghị nchekasị ọ bụrụ na ịnya nnukwu ugbo ala ma ọ bụ SUV, ebe nchekwa ụgbọ ala abụọ n'otu n'otu na-atụ 10 'L x 20' W, nke ewuru maka ugbo ala kachasị ukwuu. Anyị ekpuchila gị ma a bịa na nchekwa ụgbọala site na ịnye nchekwa zuru oke site na ihe ndị ihu igwe siri ike na ọnụ ala.
Ihe eji emeputa ihe ndi ozo bu ihe omuma akwu, mgbochi ocha na mgbochi UV. Ihe mkpuchi klaasị ụlọ ọrụ maka ịdịte aka na nchedo dịtere aka.
2 enwere ike iwepu akụkụ ndị nwere windo ụdị mpịachi dị ọcha, windo ọ bụla nwekwara mkpuchi windo na mpụga nke na-enye ohere ọkụ n'ime.
Ogo dị elu, ntụ ntụ dị arọ kpuchie steel.Rust & corrosion frame. Ogwe osisi ọ bụla nwere bọtịnụ snap iji tinye mkpanaka ahụ ngwa ngwa na idebe ya. Umu ahihia ndị ahụ ekpebiela ụzọ ha ga-esi kegide eriri ụyọkọ ahụ ma jiri grommets na-eme ka ihe ọ bụla ghara imebi ngwa ngwa. Cordọ ụyọkọ ndị ahụ dị mfe iji kegide oghere ndị ahụ wee kechie mkpanaka ígwè iji mezie.
Ndepụta ebe nkwakọba ihe maka gị. Na mgbakwunye, usoro nke ọ bụla anyị ga-etinye nkuzi mkpọkọta na katọn maka ịdị mma gị.
Nke gara aga: Ulo eji agba aja aja Green House maka oru ugbo 6x3x2m
Osote: N'èzí ellingzụta entslọ Akwụkwọ Na-ekpo ọkụ Maka Mmemme Party
Ebe a na-edebe Garagbọala Gara Gara
Entlọ ntu ebe nchekwa ụgbọ ala
Ulo ndi eji echekwa ha nke ulo
Igwe eji ebugharị ụgbọ ala ebugharị nwere mgbochi mmiri 10′x2 ...